कांग्रेसमा रडाको बढ्दै - Jhilko
काठमाडौं । विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर सङ्कलन गर्ने भन्दै नेपाली कांग्रेसभित्रको असन्तुष्ट पक्षले जिल्ला सभापतिहरुको भेला बोलाएको छ । यही चैत २० र २१ गते काठमाडौंमा हुने गरी भेलाको मिति तय गरिसकिएको छ । ७७ मध्ये करिव ४४ जना जिल्ला सभापति असन्तुष्ट पक्षका छन् । सभापति शेरबहादुर देउवा कुनै हालतमा पनि भेला तुहाउने अभियानमा जुटेका छन् । जिल्ला सभापतिहरुको भेला बोलाउने अभियानबाट असन्तुष्ट पक्ष पछि हटेन भने नेपाली कांग्रेसभित्र गम्भीर खालको रडाको उत्पन्न हुने सम्भावना देखिएको छ ।
केन्द्रीय समितिमा रहनेहरु स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था खारेज गर्न र आरक्षणको कोटामा दोहो¥याएर प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्था नराख्न जिल्ला सभापतिहरुको भेलाले माग गरेको थियो । यो माग अनुसार विधान संशोधन नगरिएको भन्दै असन्तुष्ट पक्षका जिल्ला सभापतिहरुले विज्ञप्ति निकाल्दै विशेष अधिवेशनको चेतावनी दिएका थिए । सभापति देउवाले वार्ताका लागि बोलाउने अनुमानका साथ असन्तुष्ट पक्षका जिल्ला सभापतिहरुले विशेष अधिवेशनको चेतावनी दिएका हुन् । तर विज्ञप्तिको जवाफ सभापति देउवाले यसरी दिए, ‘तागत भए विशेष अधिवेशन गरेर देखाए हुन्छ ।’ देउवाको यो जवाफपछि तागत देखाउनुपर्ने बाध्यतामा असन्तुष्ट पक्षका जिल्ला सभापतिहरु परेका हुन् ।
विशेष महाधिवेशनको मागका लागि हस्ताक्षर सङ्कलन गर्ने प्रयोजनका लागि भेला बोलाइएको नुवाकोट जिल्ला सभापति जगदीशनरसिंह केसी बताउँछन् । विधान अनुसार २५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले लिखित रुपमा माग गरेमा छ महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनु पर्छ । इतर पक्ष एकजुट भएर लाग्दा २५ प्रतिशत हस्ताक्षर पु¥याउन कुनै कठिन छैन । यसलाई राम्रोसँग बुझेका सभापति देउवाले यो अभियान तुहाउन यतिबेला दुई वटा रणनीति तय गरेका छन् ।
पहिलो रणनीति हो– ‘असन्तुष्ट पक्षका जिल्ला सभापतिहरुको सङ्ख्या ४४ बाट घटाएर ३५ मा झार्ने ।’ ७७ मा ३५ भनेको अल्पमत हो । हुन त जिल्ला सभापतिहरुको बहुमत र अल्पमतले निर्णय प्रक्रियामा कुनै अर्थ राख्दैन । आधाभन्दा कम जिल्ला सभापतिहरुले गरेको निर्णयले नैतिक अर्थ राख्दैन ।
दोस्रो रणनीति हो– ‘जुनजुन जिल्लाका सभापति आफूविरुद्ध गतिविधि गरिरहेका छन्, उनीहरुलाई पनि विशेष जिल्ला अधिवेशन बोलाएर पदमुक्त गरिदिने । यसका लागि संस्थापन पक्षले तीब्र रुपमा तयारी अघि बढाएको छ । डाडुपन्यु आफ्नै हातमा रहेको अवस्थामा आफ्नो विरोधमा लागेका जिल्ला सभापतिहरुलाई अविश्वास प्रस्तावको प्रक्रिया पूरा गरी पदमुक्त गर्न सक्ने सामाथ्र्य सभापति देउवा राख्छन् ।
यसै प्रयोजनका लागि जिल्ला सभापतिहरुको काम अनुगमन गर्न हरेक जिल्लामा केन्द्रीय सदस्यहरुलाई प्रतिनिधिका रुपमा खटाउने निर्णय सभापति देउवाले गरिसकेका छन् । असक्षम जिल्ला सभापतिहरुलाई विशेष जिल्ला अधिवेशन गरी हटाउन सक्नेसम्मको अधिकार दिएर केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाउने तयारी गरिएको छ । पहिलो टार्गेट नुवाकोट जिल्ला सभापति केदारनरसिंह केसी पर्ने सम्भावना देखिएको छ । संस्थापन पक्षले गरेको यो तयारीसँगै असन्तुष्ट पक्षका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला अचानक विरामी परेका छन् ।
जिल्ला कार्यसमिति, निर्वाचन क्षेत्रीय समिति कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् ? बैठकको अवस्था के छ ? पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्तिको अवस्था के छ ? कार्यप्रगति के कति भएको छ ? अप्ठेराहरु के के छन् ? सबै अध्ययन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी संस्थापन पक्षले केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाउने तयारी गरेको छ ।
१४ औं महाधिवेशनको मिति आउन ११ महिना मात्र बाँकी रहेका बेला असन्तुष्ट पक्षबाट जिल्ला सभापतिहरुको भेला तथा विशेष महाधिवेशनको मागसहित गतिविधि बढाइएपछि सभापति देउवालाई खुदो भएको छ । यही निहुँमा उनले आफ्नो कार्यकाल कम्तिमा एक वर्षदेखि बढीमा डेढ वर्ष थप्न सक्ने भएका छन् । चार वर्षे अवधिभित्रै महाधिवेशन हुनु पर्ने माग राख्दै आएको असन्तुष्ट पक्षले नै महाधिवेशन पर धकेल्ने गतिविधि गर्न थाल्नु अन्ततोगत्वा देउवालाई ने सहयोग पु¥याउनु हो ।
केन्द्रीय समितिको कार्यकाल थपिएपछि जिल्ला कार्यसमितिको कार्यकाल पनि स्वतः थपिन्छ । पार्टीका जिल्ला सभापतिहरुले आफ्नो समेत कार्यकाल थप्ने रणनीतिअन्तर्गत यो अभियान सुरु गरेका हुन् कि भन्ने विश्लेषण पनि कांग्रेसवृत्तमा गरिएको छ । कार्यकाल थप्ने अभियानमा सभापति देउवा छन् भन्दै प्रचार गर्ने तर निर्धारित समयमा महाधिवेशन हुनै नसक्ने परिस्थिति निर्माण गर्ने रणनीति इतर पक्षले अवलम्बन गरेको छ ।
विधानतः कांग्रेसको नियमित अधिवेशन अबको ११ महिनापछि अर्थात् आगामी फागुनमा हुनु पर्ने हो । जसका लागि अहिलेदेखि नै नयारी आवश्यक पर्छ । तर इतर पक्षले अनेक बखेडा झिकेर सभापति देउवालाई महाधिवेशन तयारीको मौका नदिएको संस्थापन पक्षका एक केन्द्रीय सदस्य बताउँछन् । उनका अनुसार, ‘सभापति देउवा २०७५ असारमा महासमितिको बैठक बोलाउने तयारीमा थिए । २०७५ बैशाख १६ गते सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको पनि हो । तर इतर पक्षले विधान संशोधन मस्यौदा समिति गठनमा बखेडा उत्पन्न ग¥यो । त्यही बखेडाका कारण महासमितिको बैठक पुसमा मात्रै सम्पन्न भयो । यदि असारमा महासमितिको बैठक सम्पन्न भई विधान संशोधन गरिएको भए यतिबेलासम्म १४ औं महाधिवेशनका लागि प्रक्रिया सुरु गर्ने ढोका खुलिसक्थ्यो । तर विधान संशोधन गर्न ढिलाइ भएका कारण १४ औं महाधिवेशनका लागि प्रक्रिया सुरु गर्न थप ६ महिना लाग्ने देखिएको छ । इतर पक्षले झमेला निकालेन भने मात्रै अबको ६ महिनापछि १४ औं महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु हुन सक्छ । तर पार्टीभित्रैबाट झमेला निकालिएको अवस्थामा भने १४ औं महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गर्न सकिने अवस्था नै रहँदैन ।’
त्रिविले क्वारेन्टाइनका लागि केन्द्रीय विभाग, कार्यालय...
विश्वविद्यालयका रिक्त भवन, तीन हजार रोपनीभन्दा बढी खुला जग्गा तथा अन्य स्रोत साधन...
कोभिड–१९को भ्याक्सिनको पहिलो ‘क्लिनिकल ट्रायल’ चीनमा सुरक्षित...
बेइजिङ इन्स्टिच्युट अफ बायोटेक्नलजिका प्रोफेसर तथा यो अध्ययनका प्रमुख जिम्मेवार...